बाहिरियो राष्ट्रपति भण्डारीलाई हटाउने अन्तिम भित्री तयारी, दुईतिहाई पुर्याउन को-को लागेका छन् ? — Imandarmedia.com
बाहिरियो राष्ट्रपति भण्डारीलाई हटाउने अन्तिम भित्री तयारी, दुईतिहाई पुर्याउन को-को लागेका छन् ?
काठमाडौं – नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउने सम्भावनाबारे चर्चा भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोगमार्फत संसदमा उपलब्ध सदस्यहरूको दुईतिहाइ मतले बर्खास्त गर्न प्रतिनिधि सभामा १८० जना सांसद भएमा सम्भव रहेको छ ।
विश्वासको मतमा मतदान नगरेका माधव समूहका ८ सांसद जोड्दा अहिले शेरबहादुर देउवासँग १७३ जनाको समर्थन रहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका बाँकी ७ जना सांसदलाई मन्त्री बनाइदिएपछि राष्ट्रपति हटाउन मुस्किल नपर्ने महेश बस्नेतको भनाइ रहेको थियो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएकै रात राष्ट्रपतिद्वारा भलाकुसारी गरिएका ३ पात्रमा केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल र यिनै महेश बस्नेत रहेका थिए । जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।
यता मंगलवार नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदसँग छलफल गरे । पार्टीले कारवाही गर्ने तयारी भइरहेका बेला आफूलाई साथ दिएका सांसदसँग उनले परामर्श गरेका थिए ।
भेलामा सहभागी सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ ९किसान०ले उत्साहित हुँदै माधव नेपाललाई दलको नेता बनाउन आफूले १५र२० जना सांसद ओली पक्षबाट तान्न सक्ने दावी गरेको अर्का एक सांसदले बताए । उनले ओलीलाई संसदीय दलमै अल्पमतमा पार्न सकिने उपाय बताएका थिए ।
किसान श्रेष्ठले उत्साही भएर १५र२० जना सांसद जुटाउँछु भने पनि त्यो संख्याले समेत बहुमत पुग्दैन । सोही भेलामा अरु केही सांसदले संसदीय दलमा केपी ओलीलाई अल्पमतमा पार्न कम्तिमा यो संसद रहेसम्म सम्भव नरहेको बताएका थिए ।